You are here: Home somal Koobkii Kooxaha Heer koowaad oo Kooxda Duulista iyo Hawada ku guulaysatay iyo Ciyaartii xisaaha badnayd ee ay leeyatay Nuuradiin School
Hadaba ciyaartani ayaa waxaa goob joog ka ahaa Masuuliyiinta wasaarada Dhalinyarada,ciyaaraha iyo dalxiiska oo uu Horkacaayo wasiirka wasaaradu mud. Siciid raygal iyo waliba talyaha ciidanka Booliska Somaliland Mud. Cabdilaahi Iiman (Fadal), Wasiirka Wasaarada Duulista iyo Hawada iyo Maamulaha Schoolka Nuuradiin.
Hadaba Ciyaartani oo Ahayd Mid aad u Xamaasad Badnayd Isla markaana Soo jiidatay Tageerayaashii dawanaayay Ayaa waxaa half kii Hore ee Ciyaarta lagu kala nastay 0-0 intaasi kadib Markii Ay koox Waliba La Soo Tashatay Tababaraheedi Ayaa Waxaa dhacday Weerar iyo Weerar Celin Iyada Oo Kadib Goal keedi koobad ay u suuro Gashay Kooxda ku Ciyaaraysay Magaca wasaarada Duulista iyo Hawada, isaga oo uu u saxeexay ciyaartoyga ka ciyaara Af-ka Hore Mr: muxuyadiin.
Hadaba kooxda Nuuradiin Ayaa Goalkaasi Kadib Qaaday weeraro Fara Badan Hase Ahaate way u suuro gali weyday, iyada oo ay sidaasna guushu ku raacday Kooxda Duulista Iyo Hawada, halkaasina lagu gudoonsiiyay koobkii.
Hargeisa: Somal Sports
KOOXDA DUULISTA KOOXDA NUURADIIN